सौगात र बुद्धिको नयाँ फिल्म 'मन्त्र' को प्रदर्शन मिति सार्वजनिक Canada Nepal
तनावबीच मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, गठबन्धनको जित
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक, विजयी कसले कति पाए ? (सूचीसहित)
देउवा अध्यक्ष हुँदाका उपाध्यक्ष शर्मा पहिलो पटक बने सांसद, सम्बन्ध कस्तो थियो ?
वास्तविकतामा देखियो 'पुष्पा'मा प्रस्तुत गरिएको दृश्य, संलग्न ५८ जना जंगलबाट समातिए
१९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी, एकमा मात्र एमाले विजयी
राष्ट्रिय सभा चुनाव : एमालेले ८ मध्ये ७ सिट गुमायो
मधेश प्रदेशबाट गठबन्धनका मोहम्मद विजयी
गोरखामा भूकम्पको धक्का महसुस
सौगात र बुद्धिको नयाँ फिल्म 'मन्त्र' को प्रदर्शन मिति सार्वजनिक
क्यानाडा नेपाल मंसिर १४ २०७८
काठमाडौँ । अभिनेता सौगात मल्लको नयाँ फिल्म 'मन्त्र'को फस्ट लुक सार्वजनिक भएको छ । खिलबहादुर गुरुङले निर्देशनमा बन्ने यस फिल्मको प्रदर्शन मिति पनि घोषणा गरिएको छ ।
हिमाली प्रेमकथा बोल्ने यस फिल्म माघ २८ गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ । फिल्मको फस्ट लुक पोस्टरमा सौगातसँगै बुद्धि तामाङ र दिया पुन पनि देखिएका छन् ।
यो फिल्मको छायांकन ५ हजार १०० मिटरभन्दा माथिको मनासलु हिमालको बेस क्याम्पमा गरिएको हो । फिल्ममा रविराज खत्री, सुरेश कार्की र शुभ श्रेष्ठको लगानी रहेको छ भने साम्तेन भुटियाको कथा रहेको छ ।
मंसिर १४, २०७८ मंगलवार १४:०९:०० बजे : प्रकाशित
कोरोना बढेपछि ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ काे रिलिज पोस्टपोन्ड
काठमाडौं - निर्देशक सुदर्शन थापाले आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को रिलिज डेट पोस्टपोन्ड गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमण तीव्र बढेसँगै सरकारले अत्यावश्यकबाहेक बाहिर ननिस्कन भनेको र सिनेमा हल बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले १९ माघलाई तय प्रदर्शन मिति हाललाई स्थगित गरिएको निर्देशक थापाले जानकारी दिएका छन् ।
थापाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बढ्दो संक्रमणका कारण ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ निर्धारित समयमा प्रदर्शन नहुने जनाएका छन् । उनले अवस्था सामान्य भएपछि उही उत्साह र जोशका साथ प्रदर्शनको नयाँ मिति घोषणा गरिने जानकारी दिएका छन् । म यस्तो गीत गाउँछु २ मा पल शाह र पूजा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
माघ ५, २०७८ बुधवार १२:३१:३८ बजे : प्रकाशित
मदानी महोत्सवमा भाग लिन भोजपुरी सुपरस्टार खेसरीलाल रौतहट आउँदै
रौतहट - भोजपुरी फिल्मका सुपरस्टार खेसरीलाल यादव रौतहट आउने भएका छन् । मौलापुर नगरपालिकाले बर्सेनि आयोजना गर्दै आएको मदानी महोत्सवमा भाग लिनका लागि गायकसमेत रहेका अभिनेता यादव रौतहट आउन लागेका हुन् ।
‘१७ फागुनमा खेसरीलाल मौलापुरमा आउने तय भएको छ,’ नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य निवेश यादवले भने । उनका अनुसार सो बारेमा आयोजक र अभिनेता बीच समझदारी भइसकेको छ ।
केही दिनअघि सुनसरीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा आउने क्रममा भएको झडपमा उनको गाडी तोडफोड भएको थियो ।
माघ ६, २०७८ बिहिवार १२:४०:२७ बजे : प्रकाशित
अभिनेत्री रेखाले आउँदो बैशाखमा अमेरिकी एनआरएनसँग विवाह गर्न लागेको चर्चा
काठमाडौं - नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री रेखा थापाले आफ्नो विवाहबारे खुलासा गरेकी छन् । आफ्नो विवाह बारे अभिनेत्री रेखाले नै खुलाएकी हुन् ।
निर्माता छविराज ओझासँग सम्बन्ध तोडिएपछि विवाह बन्धनमा नबाधिँएकी रेखाले आउँदो वैशाखमा विवाह गर्ने बताइएको छ । उनले अमेरिकी एनआरएनसँग विवाह गर्ने लागेको चर्चा पनि चलेको छ ।
उनले एक टेलिभिजन अन्तवार्तामा पत्रकारसँग रेखाले विवाहबारे कुरा गरेकी थिइन् । आफू केटाको खोजीमा रहेको बताउदै उनले आफू जस्तै मन र कुरा मिल्ने केटासँग विवाह गर्ने बताइन् । उनले विवाह गर्ने व्यक्ति इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिरको हुने पनि बताएकी थिइन् ।
उनले आफू देशको साधारण मानिस भएकाले आफ्नो विवाह पनि धुमधामले नभई साधारण तरिकाले गर्ने बताइन् ।
माघ ७, २०७८ शुक्रवार १३:४५:१० बजे : प्रकाशित
सुनिलको 'को होला त्यो २' को फिमेल भर्सनमा सुदुरपश्चिमको माया
काठमाडौँ । लोकप्रिय लोकपप गायक सुनिल गिरीको नयाँ गीत को होला त्यो २ को फिमेल भर्सन 'तिमी आउँछौ की' भनीको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ ।
शुक्रबार गायक गिरीकै अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको गीतमा शब्द, संगीत गायक गिरीकै रहेको छ भने गीतमा गायिका सुमन गुरुगंको स्वर रहेको छ ।
गीतमा गोपाल रसाइलीको एरेन्ज रहेको छ । को होला त्योको अपार सफलतापछि गायक गिरीले तिमी आउँछौ की भनीमा सुदुरपश्चिमका एक जोडीको प्रेमी कहानीलाई मोडलद्धय पल शाह र कृष्टिना थापाको माध्यमबाट भिडियोमा देखाएका छन् ।
भिडियोमा पल र कृष्टिना गज्जबसँग खुलेको देख्न सकिन्छ । नयाँ नयाँ लोकेशनमा आफ्ना एक पछि अर्को भिडियोहरु छायांकन गर्दै बजारमा ल्याइरहेका गायक गिरीले तिमी आउँछौ कीमा दर्शकले बिल्कुलै नयाँ स्वाद पाउने बताए । भिडियोको छायांकन र निर्देशन अनिल के मानन्धरले गरेका हुन् भने सम्पादन र कलरिगं मनोज कार्कीले गरेका हुन् ।
माघ ७, २०७८ शुक्रवार २०:५७:४१ बजे : प्रकाशित
नेटफ्लिक्सको बहुप्रतीक्षित वेब सिरिज ‘बाहुबली-बिफोर द बिगिनिङ’ पुनः रोकियो
काठमाडौं - नेटफ्लिक्सको बहुप्रतीक्षित वेब सिरिज ‘बाहुबली-बिफोर द बिगिनिङ’ पुनः रोकिएको छ । यो वेब सिरिज निकै लामो समयदेखि बनिरहेको छ । जसका लागि निर्माताले सय करोड बढी लगानी गरिसकेका छन् ।
समाचारअनुसार वेब सिरिजको धेरै भागको सुटिङ भइसकेको छ । तर निर्माताले यो प्रोजेक्टलाई अस्वीकार गरेर पुनः बनाउन सुरु गरेका छन् । यहाँसम्म कि वेब सिरिजमा शिवगामीको भूमिका निभाइरहेकी मृणाल ठाकुरलाई पनि रिप्लेस गरिएको थियो । निर्माता बाहिर सुने जस्तो वेब सिरिजलाई विशाल रूपमा निर्माण गर्ने पक्षमा छैनन् ।
यो सिरिजमा पुनः अभिनेत्री वामिका गाबीको प्रवेश भएको छ । सिरिजमा तमिल अभिनेत्री नयनतारा पनि देखिँदैछिन् । यो वेब सिरिजलाई पुनः बनाउनका लागि निर्माताले दुई सय करोड बजेट तयार पारेर राखेका छन् । यो वेब सिरिजको जिम्मेवारी ‘केशरी’ निर्देशक अनुराग सिंहलाई दिने तयारी भए पनि निर्देशकसँग निर्माताको कुरा मिल्न सकेको छैन ।
माघ ८, २०७८ शनिवार ०९:०५:४५ बजे : प्रकाशित
भोजपुरी फिल्ममा तहल्का मच्चाउँदै शिल्पा, दुई फिल्ममा निरहुवासँग रोमान्स गर्दै
काठमाडौं - अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल पछिल्लो समय भोजपुरी फिल्ममा व्यस्त हुन थालेकी छन् । नेपाली फिल्ममा कम अफर आउन लागेपछि भोजपुरी फिल्ममा अभिनय गर्न थालेकी शिल्पा कोरोना कहरमा पनि व्यस्त छिन् । अब उनले दुई भोजपुरी फिल्ममा अभिनय गर्ने पक्का भइसकेको छ ।
उनले फिल्ममा भोजपुरी सुपरस्टार दिनेशलाल यादव निरहुआसँग रोमान्स गर्नेछिन् । उनले अभिनय गर्ने 'निरहुआ चलल लण्डन २' र 'हनुमान की गली' मा भूमिका मूख्य नायिकाको रहेको छ ।
यस फिल्मलाई निर्देशक सोनु खत्रीले निर्देशन गर्नेछन् । फिल्ममा शिल्पासँगै आम्रपाली दुवे, देव सिंह, अनुप अरोरा, अशी तिवारीलगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ ।
माघ १०, २०७८ सोमवार २०:२८:४२ बजे : प्रकाशित